搜索 Dama 的结果：
dama：n．[〃＜dam] 調御，調伏，訓練．instr．damasā，damena．-upasama 調御寂止，調伏訓練止息，忍辱.
dama：n．[〃＜dam] 調御，調伏，訓練．instr．damasā，damena．-upasama 調御寂止，忍辱.
Dama，damatha，【阳】 Damana，【中】 驯服，征服，抑制，控制。（p152）
[ဒမ=ဒမု+အ။ ဓာန်၊ဋီ။၇၅၈။ နီတိ၊ဓာ။၁၃၂၊၂၃၇။]
dama：[m.] taming； subjugation； restraint； mastery.
Dama，（adj.-n.） （& ofant．damo the Instr．damasā） [Ved．dama； Ags．tam=E．tame，Ohg．zam to *demā in dameti] taming，subduing； self-control，self-command，moderation D.I，53 （dānena damena saṁyamena=It.15； expl．at DA.I，160 as indriya-damena uposatha-kammena） III，147，229； S.I，4，29，168=Sn.463 （saccena danto damasā upeto）； S.IV，349； A.I，151； II，152 sq.； M.III，269 （+upasama）； Sn.189，542 （°ppatta），655； Dh.9，25，261； Nett 77； Miln.24 （sudanto uttame dame）．duddama hard to tame or control Dh.159； PvA.280； Sdhp.367．-- arindama taming the enemy （q．v.）．（Page 314）
DAMA：，--matha [m] damana [nt] thuần hóa，thu thúc，hạn chế，chủ quyền
（၁） ဆုံးမ-ခြင်းဟူ-တတ်-ကြောင်းဖြစ်-သော၊ （က） ဣန္ဒြိယသံဝရသီလ။ ဣနြေ္ဒတို့ကို-စောင့်စည်း-တားမြစ်-ပိတ်ဆို့-ချုပ်တည်း- ခြင်းဟူ-တတ်-ကြောင်းဖြစ်-သော သီလ၊ （ဂ） လည်းကြည့်ပါ။ （ခ） ဥပုသ်သီလ （ပါဏာတိပါတ-စသော ကမ္မ ကိလေသာတို့ကို-ငြိမ်း-ငြိမ်းစေ-ရှောင်ခွါ-ခြင်းဟူ-တတ်-ကြောင်းဖြစ်-သော သီလ） ၊ （ဂ） လည်းကြည့်ပါ။ （ဂ） ဝိပဿနာပညာ မဂ်ပညာ မဂ်သမ္မာဒိဋ္ဌိ （ရာဂစသောကိလေသာတို့ကို-ငြိမ်း-ငြိမ်းစေ-စွန့်ပယ်-ခြင်းဟူ-တတ်-ကြောင်းဖြစ်-သော ပညာ）၊ （စ）လည်းကြည့်ပါ။ （ဃ） အဓိဝါသနခန္တိ （ဗျာပါဒ ဝိဟေသာ-စသော တရားဆိုးတို့ကို-ငြိမ်း-ဖျောက်ပယ်-ခြင်းဟူ-တတ်-ကြောင်းဖြစ်-သောသည်းခံမှု） ၊ （ဂ） လည်းကြည့်ပါ။ （င） သမာဓိ၏ အပေါင်းအဖော်ဖြစ်သော တရား （စိတ်ကို-နှိပ်ကွပ်-ယဉ်ကျေးစေ-ခြင်းဟူ-တတ်-ကြောင်းဖြစ်-သော သတိသမ္ဗောဇ္ဈင်စသည်။ （စ） ဝိပဿနာပညာနှင့် ယှဉ်သော ကာယိက-စေတသိက -ဝီရိယ（ကောသဇ္ဇ ကောဓ-စသည်ကို-ဖြတ်ပယ်-ခြင်း ဟူ-တတ်-ကြောင်းဖြစ်-သောလုံ့လ）။ （ဆ） ဖောက်ပြန်စွာ -မှီဝဲ-တုန်လှုပ်-ခြင်း၏ ငြိမ်း-ချုပ်-ခြင်း။ မာန်မာနကင်းခြင်း။ （ဇ） မရိုင်းစိုင်း-မရိုင်းပြ-ခြင်း။ ဒမထ-（၁）-ကြည့်။ （ဈ） ထော်လော်ကန့်လန့် -ဆန့်ကျင်ဖက်-မပြုခြင်း။ လိုက်လျော်ခြင်း။ ဒမထ-（၁）-ကြည့်။ （ည） လိမ်မာအောင်- သွန်သင်-ညွှန်ပြ- လေ့ကျင့်-စေခြင်း။ ဒမထ，ဒမန-တို့ကြည့်။ （၂） မာန်မာနကင်းသည်၏ အဖြစ် （ဘာဝပ္ပဓာန်）（ပု） （၃） ဒဏ္ဍဥပါယ် ဒဏ်-တပ်-ခတ်-ပေး-ခြင်း။ အဒမိတ-ကြည့်။ （တိ） （၄） ဆုံးမသူ။ သွန်သင်-ညွှန်ပြ-သူ။ （နှိပ်နင်း-နှိပ်ကွပ်-ဖိစီး-ခြင်း- မိမိကိုယ်တိုင် ချုပ်တည်းခြင်း၊မကောင်းသော အပြုအမူမှ ကောင်းသောစိတ်သို့ ပူးကပ်ခြင်း။P.S.D။ ရွံ့ညွန်၊ရွံ့နွံ။ထောမ။ ငြိမ်အေးခြင်း။ စိန္တာမဏိ）။ မူရင်းကြည့်ပါ။
ဘူ = ဂတိမှိ-သွားခြင်း၌။ ဒမနေ စ-ဆုံးမခြင်း၌လည်း။ ဥပသမေ စ-ငြိမ်သက်ခြင်း၌လည်း။ ဒမတိ။
dama：ဒမ	（ပ） （√ဒမ်+အ）
အိမ်။ ဆုံးမခြင်း။ ဣနြေ္ဒကို ဆုံးမခြင်း။ ဆုံးမသော သူ။
[dā+ma．，ṭī.499．ka.628．rū.653．nīti，sutta.1236．do+ma．thoma．nīti，pada.335-nitea ]thī，na] hu eiea．（dā-saṃ）]
[ဒါ+မ။ ဓာန်၊ဋီ။၄၉၉။ ကစ္စည်း။၆၂၈။ ရူ။၆၅၃။ နီတိ၊သုတ္တ။၁၂၃၆။ ဒေါ+မနိန်။ ထောမ။ နီတိ၊ပဒ။၃၃၅-၌ 'ထီ၊န' ဟု ဆို၏။ （ဒါမန်-သံ）]
Dāma，（nt.） [Sk．dāman to dyati to bind （Gr．di/dhmi），*dē，as in Gr．dέsma （rope），diάdhma （diadem），u（pόdhma （sandal）]abond，fetter，rope； chain，wreath，garland S.IV，163 （read dāmena for damena），282，（id.）； A.III，393 （dāmena baddho）； Sn.28 （=vacchakānaṁ bandhanatthāya katā ganthitā nandhipasayuttā rajjubandhanavisesā）； Vism.108．Usually --°，viz．anoja-puppha° J.I，9； VI，227； olambaka° VvA.32； kusuma° J.III，394； gandha° J.I，178； VvA.173，198； puppha° J.I，397； VvA.198； mālā° J.II，104； rajata° J.I，50； III，184； IV，91； rattapuppha° J.III，30； sumana° J.IV，455．（Page 319）
DĀMA：[m] sợi dây，dây xích，tràng hoa，tràng hoa lá
（၁） ပန်းဆိုင်း၊ ပန်းကုံး။ ဃဋိကဒါမ-လည်းကြည့်။ （န） （၂） ကြိုး၊ နွားချည်ကြိုး။ မူရင်းကြည့်ပါ။
ပန်းကုံး။ ပန်းဆိုင်း။ နွားချည်ကြိုး။
Dāmā：An aggasāvikā of Vessabhū Buddha．Bu.xxii.24； J.i.42.
ဒါမာ အမည်ရှိသော မထေရ်မ （ဝေဿဘူမြတ်စွာဘုရား၏ မြတ်သော တပည့်မ）။
与 Dama 相似的巴利词：